दक्षिण कोरिया ‘नो ब्रा मुभमेन्ट’ ले तरङ्गित - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
थप ३३४ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या २६३४ पुग्यो
दक्षिण कोरिया ‘नो ब्रा मुभमेन्ट’ ले तरङ्गित
एजेन्सी । दक्षिण कोरियामा ‘नो ब्रा मुभमेन्ट’ चलिरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दक्षिण कोरियाली महिलाहरू भित्र ब्रा नलगाई बाहिरी पोसाक मात्र लगाई खिचिएका आफ्ना तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित गरिरहेका छन्।
यो अभियान स्थानीय महिलाले #NoBra का साथ सामाजिक सञ्जालमा चलाएका हुन् । महिलाहरुले ब्रा नलगाएका तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्ने होड चलेको छ ।
यो अभियानको शुरुवात कहाँबाट र किन भइरहेको छ ?
सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा लाखौँ फलोअर रहेको आफ्नो खातामा दक्षिण कोरियाली अभिनेत्री तथा गायिका सुलीले भित्र ब्रा नलगाएको आफ्ना तस्बिर प्रेषित गरेपछि अरूले पनि उनको अनुसरण गर्न थालेका हुन्। हेर्दाहेर्दै यो तस्बिर भाइरल भयो ।
अनि दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्: ब्रा लगाउनु वा नलगाउनु “व्यक्तिगत स्वतन्त्रता”को विषय हो।
ब्रा नलगाउने अभियान
दक्षिण कोरियामा उनी धेरैका लागि ब्रा नलगाउने अभियानको प्रतीक बनेकी छन्। यो अभियानमार्फत् दक्षिण कोरियाका महिलाले ब्रा लाउने वा नलाउने भन्ने विषय महिलाको निजी अधिकारको कुरा भएको सन्देश दिइरहेका छन् । यो अभियानमा धेरैले सुलीको पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् भने कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन् । यो मामिलामा महिला र पुरुष दुवै सामेल छन् ।
कतिपयले यसलाई सस्तो लोकप्रियताको नाम दिएका छन् । कतिपयले भने सुलीले महिलाको आन्दोलनलाई आफ्नो हैसियत बढाउने उपायका रुपमा अघि बढाइरहेको जनाएका छन्
महिला अभियानलाई आफ्नो ख्यातिका लागि उनले प्रयोग गरेको केही मानिसको भनाइ छ।
“म बुझ्छु कि ब्रा लगाउनु तपाईँको इच्छाको कुरा हो। तर आफ्ना स्तनहरू उठेको देखियून् भनेर उनी सधैँ कसिएको कमिज लगाएर तस्बिर खिच्न लगाउँछिन्। उनले त्यसो गर्नु नहुने हो,” इन्स्टाग्राममा एकजना प्रयोगकर्ताले टिप्पणी गरेका छन्।
“तपाईँले ब्रा नलगाएकोमा हामी केही भन्दैनौँ। हामीले यति भनिरहेका छौँ कि तपाईँले आफ्ना स्तनको मुख देखाउनुहुँदैन,” अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्।
“लाज मान्नुपर्छ। के तिमी यसरी गिर्जाघर जान सक्छ्यौ? के यसरी नै आफ्ना दिदीबहिनीका श्रीमान्‌लाई वा सासुससुरालाई भेट्न सक्छ्यौ?” र “पुरुषहरूले मात्रै होइन महिलाले पनि यस्तो अवस्थामा असहज महसुस गर्छन्” अरू प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गरेका छन्।
ह्वासा नामले चिनिने अर्की चर्चित गायिकाले पनि आफ्ना तस्बिर हालेर #NoBra अभियानलाई फेरि चर्चामा ल्याइन्।
हालै एक हाइप्रोफाइल सिंगर व्हासाको बिना ब्राको फोटोले यो अभियानलाई अर्को झड्का दिएको छ । हालै हङकङबाट फर्किने क्रममा सुलीले बिना ब्राको सफेद टिसर्ट लगाएकी थिइन् । उनको सोही तस्बिर भाइरल भएको हो । यो तस्बिरपछि दक्षिण कोरियाका सबै महिलाको लागि यो एक अभियान बनेको छ ।
यो पहिलो घटना होइन।
दक्षिण कोरियामा महिलाहरूले आफ्नो रुचिमा स्वतन्त्रता खोजेको यो पहिलो घटना होइन।
सन् २०१८ मा ‘इस्केप द कोर्सेट’ अभियान लोकप्रिय भएको थियो। सो अभियानअन्तर्गत धेरै महिलाहरूले कपाल मुण्डन गराए र शृङ्गार गरेनन्।
विद्रोहको सङ्केतका रूपमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर प्रेषित गरे।
‘इस्केप द कोर्सेट’को नारा अवास्तविक सौन्दर्यको मापदण्डको विरोधमा आएको थियो जसले महिलाहरूलाई शृङ्गार गर्न र छालाको स्याहार गर्न घण्टौँ बिताउन बाध्य पार्छ।
स्वतन्त्रता कि विरोध ?
यसैगरी दक्षिण कोरियामा महिलालाई घुरेर पुरुषले हेरेको पनि मन पराइँदैन । सो समाजमा पुरुषको दबदबा, यौन हिंसा र लुकेर महिलालाई हेर्ने गतिविधिका विरुद्धमा पनि अभियान चलिरहेको छ । दक्षिण कोरियामा धेरै सार्वजनिक स्थानमा जस्तो– होटलको कोठा, बाथरुम र शौचालयमा क्यामेरा लुकाएर राखेको अवस्थामा पाइने गरेको छ । ताकि महिलाका गोप्य गतिविधि क्यामेरामा छिपाएर देखाउन सकियोस् । पुरुष लुकेर महिलालाई हेर्नु महिलाको निजी स्वतन्त्रताको हनन् भएको महिलाहरुले बताइरहेका छन् ।
दक्षिण कोरियामा महिलाले यस्ता गतिविधिका विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन् । सन् २०१८मा यसबारे दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो महिला अभियान चलेको थियो । त्यतिबेला दशौं हजार महिला सडकमा उत्रेर खुफिया क्यामेरामा रोक लगाउने माग गरेका थिए । धेरै महिलाहरुले ब्रा नलगाउने अभियानको आफूहरु समर्थनमा रहेको जनाएका छन् । दक्षिण कोरियामा महिलालाई घुरेर हेर्ने कामलाई ‘गेज रेप’ भन्ने गरिएको छ ।
ब्रा नलाउनु ठीक हो ?
अष्ट्रेलियाको वोनगोंग युनिभर्सिटीका डा डेड्रे मैक्घी महिलालाई यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेको बताउँछिन् । तर स्तन भारी भएको अवस्थामा सहाराका लागि जरुरत पर्ने उनको भनाइ छ । यसको असर गर्दन र पिठमा पनि पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले मात्रै होइन, सन् १९६८मा पनि मिस अमेरिका ब्युटी कन्टेस्टको क्रममा महिलावादीले ब्रा जलाएर विरोध जनाएका थिए । प्रदर्शनको क्रममा महिलाले डस्टबिनमा ब्रा फालेका थिए । यसै वर्षको जुन महिनामा स्वीट्जरल्याण्डमा पनि आफ्नो तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै महिलाहरुले सडकमा प्रदर्शन गर्दै ब्रा जलाएका थिए ।
ब्रेस्ट क्यान्सरको विरुद्धमा अक्टोबर १३ का दिन विश्वभरी ‘नो ब्रा डे’का रुपमा समेत मनाउने गरिएको छ । तर अघिल्लो वर्ष फिलिपिन्सका महिलाले यो दिनलाई लैंगिक समानताको अधिकार माग्ने दिनका रुपमा मनाउन थालेका थिए ।
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएन)ले नेपालीला...
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्‍न...